⁭မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ခညောင်း သော ကိုတုတ်ကြီး: August 2009
ဖြောင့်ညာညာ တဲ့ ဖြာ့ညောင်ညောင်
ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲမှာ အရာရှိ ငယ် တစ်ယောက်အနေနဲ့ အမှတ် ၅ မရိန်းတပ်ရင်းမှာ တာဝန်ကျခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်တိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေ တော်တော်များများရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ဗီယက်နမ်ကို ၀င်တိုက်ခဲ့တာလဲတရားသောစစ်ပွဲမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။
မတရားသောစစ်ပွဲမှာ ရွတ်ရွတ်ချွံချွံတိုက်ခဲ့တယ်လို့ ယူ ဆရတဲ့စစ်သားတယောက်တော့ဖြစ်သလို သူ ရ ထားတဲ့ စစ်ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့ သူရဲကောင်း တံဆိပ်တွေကမနည်းဘူး။
ပြီးတော့ သူဟာ အမေရိကန်ရေတပ်မတော်မှာ Secretary of Navy အဖြစ်လဲ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်သလို စာအုပ်တွေ တော်တော်များများလည်း
ရေးခဲ့သူပဲ။အမေရိကားမှာ သူ့ ဟာနဲ့ သူတော့ အဆင့်နေရာတစ်ခု ကြွယ်ဝမှု တစ်ခု နဲ့ အလုပ်ဖြစ်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြန်သလို လူရိုသေရှင်ရိုသေထဲက တယောက်လဲဖြစ်ပါတယ် ။
သူ့ ရဲ့ ဇနီးအားလုံးဟာ သူ့ အဆင့်နေရာနဲ့သူ လူရိုသေရှင်ရိုသေတွေဖြစ်ပါတယ။် နောက်ဆုံး တတိယဇနီးဖြစ်တဲ့ ဗီယက်နမ် လူမျိုး ဇနီးကအစပေါ့။လေးစားဖွယ် ဂုဏ်ပုဒ်တွေနဲ့လူတယောက်ပါ။
သို့သော် သူ မြန်မာနိုင်ငံကိုသွားခဲ့တာရဲ့နောက်ပိုင်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲက သူ့ စကားတွေကိုပြန်ကြည့်ကြရအောင်လား ။
"With respect to Aung San Suu Kyi, I don't want to take the risk of misrepresenting her views but I would say to you it was my clear impression
from her that she is not opposed to lifting some sanctions," Webb said.
"I can say it was my impression from listening to her in the conversation that there were some areas that she would be willing to look at," he told reporters in Bangkok.
အထက်ပါအတိုင်း ကိုဂျင်ဝက် က ပြောခဲ့တယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှုတ်က ထုတ်ပြောခဲ့တဲ့ စကားမဟုတ်တဲ့သူ့ ရဲ့ ဆန္ဒစွဲနဲ့ သူလိုရာလမ်းကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးနဲ့ သူ့ အမေရိကန် အစိုးရ လိုက်လာနိုင်အောင် ခင်းတဲ့ခြေခင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပိတ်ဆို့ ရေးတွေ ဖွင့်ဖို့ မဖွင့်ဖို့ ကို အကြောင်းအရာတစ်ခုအနေနဲ့ အလေးအနက်ထားပြီးကျုပ်မဆွေးနွေးပါဘူး။
ဒီနေရာမှာ ဆွေးနွေးချင်တာ အလေးအနက် ပြောချင်တာတချက်ပဲရှိပါတယ်။
နအဖ ကို မလိုလားသူတွေရဲ့ အမေရိကန် ကို အားကိုးမှု၊ အမေရိကန်အစိုးရသာ အာနိုးကြီးကို မျက်နှာအိုးမဲသုတ် စက်သေနတ်ကြီးလွယ်ခိုင်းပြီး မုဒိန်းတပ်ဖွဲ့ နဲ့မိုးကျရွှေကိုယ်တွေလို လေထီးနဲ့ခုန်ချ နောက်တော့ ဘကြီး သန်း ကို ၀င်ဖမ်းရင်ဖြင့်ဘယ်လို...ရော့ကက်ကြီးနဲ့ ပျဉ်းမနားကိုလှမ်းပစ်လိုက်ရင်တော့ ဘယ့်နှယ်
အဲသလို အဲသလို စိတ်ကူးတွေယဉ်ကြတဲ့ လူတွေကတမျိုး ၊ အဲသလို တွေမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးသိပေမယ့် နှစ်စဉ် အမေရိကန် က ချပေးတဲ့ ရံပုံငွေနဲ့ အလုပ်ဖြစ်နေတဲ့ ဆရာတွေက တဖုံ ပေါ့။
ခုတော့မြင်ကွင်းက ရှင်း သွားသလောက်ရှိပါပြီ ကိုဂျင်ဝက်ဆိုတာ အမေရိကန် အစိုးရရဲ့ တကယ့် စီနီယာ ကြီးတယောက်ပါ ။ အဲသလို စီနီယာ တယောက်က စကားပရိယာယ်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တကယ်ပြောဆိုခဲ့တာတွေ မဟုတ်ပဲ သူ ခံစားလိုက်မိတယ် အာရုံရလိုက်ပါတယ် လို့ လူလည်ကျပြီး နအဖ
နဲ့အကွက်ပေါင်းရွှေ့ ဖို့ လုပ်တဲ့ လုပ်ရပ်ကို ကြည့်ချင်းဖြင့် မရိုးသားတဲ့ ခြေကွက်တွေနဲ့ ယခု အိုဘားမား ရုံးအဖွဲ့ က မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကွင်းမှာ ၀င်ကစားတော့မှာ သိပ်မြင်သာထင်သာလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လောက်ထိ ကစားမှာလဲ ဘယ်အတိုင်းအတာအထိ ၀င်လာမှာလဲဆိုတာကတော့ နအဖ ဖက်က ဘာတွေ ပြန်ရွှေ့ ပေးမလဲ ဆိုတဲ့အကွက်အပေါ်မှာ အများကြီးမူတည်နေပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို ပုံစံကျတဲ့ စစ်မှန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကစတင်ဖို့ အမြဲ ကမ်းလှမ်း ပြီး ဖွင့်ထားပေးတဲ့ သူပါ ။
သို့ သော် အဲဒီလို အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး တံခါးကိုဖွင့်ထား ပေးတဲ့ အမျိုးသားခေါင်းဆောင် တယောက်၊ အနိုင်ရ ပါတီကခေါင်းဆောင်တယောက်ကို ခုလို ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ဆဲ ဖြစ်နေတာကိုလဲ ကိုဂျင်ဝက်မြင်လျှက်သိလျှက် ဖြစ်ပါတယ်။ ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းကျရသူတွေထောင်ပေါင်းများစွာ
အကျဉ်းစခန်းတွေမှာရှိနေတာကိုလဲသိပါတယ်။ ၂၀၀၇မှာ သံဃာတွေကို အရှင်လတ်လတ်ပစ်သတ်၊ ခေါင်းရိုက်ခွဲ ၊ ဆွဲထိုး ၊ ခြေထောက်နဲ့ဆောင့်ကန်လုပ်ခဲ့တာတွေကိုလဲသိပါတယ်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံ အတုအယောင်ကို အဓမ္မ လိမ်ညာပြီးလုပ်ခဲ့တာကိုလဲ သိပါတယ်။ အားလုံးကို သူ့ ဟာနဲ့ သူ သိပြီးသားဖြစ်သလို သူ မသွားခင်ကတည်းကလည်း CIA က Briefing ပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် အားကိုးတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်ရာထဲက ဖိတ်စာအပြဲစနဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ အထက်ကဆွေးနွေးချက်အတိုင်း ကို ဂျင် ၀က် ဟာ ဘာဆိုတဲ့ ရုပ်လုံးကို မြင်ကြမှာပါ။ ဒီတော့ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးဖို့ အချိန်တန်ပြီ။ အမေရိကန်လဲ သူ့ အကျိုးစီးပွားအတွက် ပဲ ကြည့်တယ်။
တရုတ်လဲ သူ့ အကျိုးစီးပွားအတွက်ပဲကြည့်တယ်။ ကျန်နိုင်ငံတွေလဲ အလားတူပါပဲ။ သူတို့ အကျိုးစီးပွားအတွက် ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ့်လူမျိုးဆီက ရသမျှ ကို နှုတ်ယူ ထုတ်ယူသွားမှာတွေချည်ပါပဲ။ ဒီတော့ မမျှော်နဲ့ ။ ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာကို ပြတ်ပြတ်သားသား ပဲ မမှိတ်မသုန် လုပ်ကြသင့်ပြီလို့ ပဲသတိပေးချင်ပါတယ်။
Posted by ☺ at 7:57 PM 1 comments
ယဉ်ယဉ်လေး ပြော ရမယ် ဆိုရင်တော့ ဗျာ ဟောဒီမှာ .....ကလေးမဟုတ် အတွေးရှုပ်တော့
ဘာကြောင့် Jim Webb လာသလဲ
အမေရိကန်ဟာ အမေရိကန်အကျိုးစီးပွားအတွက်လာတာဖြစ်သလိုနအဖဟာ လဲ နအဖအကျိုးစီးပွားအတွက် ဖိတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။
အဲဒီ ဖိတ်ကြားမှုရဲ့ ဟန်ပြကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးဖို့ ပြောဆို ဖိအားပေးဖို့ လာသလိုလို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လတ်တလော အမျိုးသားပြသနာကြီးဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၀ အကြို ကိစ္စတွေကို ရှင်းဖို့လာသလိုလိုဖြစ်ပုံရပေမယ့် တကယ်တန်းပြန်ကြည့်ပါ။
တချို့ တို့ တွေ အိုဘားမားအရွေးခံရတုန်းက တကြိမ် ၀မ်းသာမျှော်လင့်ကြဖူးတယ်။ ခု Jim လာတော့တစ်ခါ မျှော်လင့်ကြတယ်။
သူမြန်မာပြည်ကို သွားတာရဲ့ root cause နဲ့ Intention က ဘာလဲ စဉ်းစားကြည့်ကြပါစို့။
သူဟာ နအဖ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ ဖိတ်ကြားမှုနဲ့ လာတာဖြစ်တယ်။သူ့ကို တွေ့ ကြသူတွေက နအဖရဲ့
key players တွေအကုန်ဖြစ်တယ်။
ကျုပ်တို့ ဘကြီး ဦးသန်းရွှေကြီးကိုယ်တိုင်ထွက်လာပြီး ဟေ့ ဟောဒါကတော့ ရွှေ မန်း ဟောဒါကတော့ မောင်အေး ဟောဒါကတော့ ကျော်ဆန်း အဲသလို တယောက်ချင်းကို ရှေ့ က လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပြီးတွေ့ တာဖြစ်တယ်။
၀မ်းပမ်းတသာ ပြုံးပြုံးကြီးကိုဖြစ်တယ်။ အိုဘားမားဆိုတာဟာလဲ street politics ကို ကျေညက်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ ဇိမ်ခေါင်းနဲ့တွေ့ ရင် အောက်ဈေးနဲ့ ညှိနိုင်သူဖြစ်တယ်။ လူမိုက်နဲ့တွေ့ ရင် တပည့်မွေးနိုင်သူဖြစ်တယ်။ သူတကယ်မလုပ်နိုင်တာတွေ ကတော့ သူ ပြောခဲ့သလိုဖြစ်တယ်။
ကမ္ဘာ့ အစဉ်အလာ ပြောင်းလဲလာမှု
သူ့ အကျိုးစီးပွားအတွက် သူ၊ သူ့ မိသားစု၊ သူ့ အသားအရောင်၊ သူ့ပါတီ ၊ သူ့ နိုင်ငံအတွက် သူဟာ ရေကုန်ရေခမ်းစွတ်တင်ပြီး သမိုင်းလှအောင် လုပ်မယ့်သူဖြစ်တယ် (ဆိုလိုတာ ပထမဆုံးအမဲသမ္မတ ဖြစ်တဲ့ သူနဲ့
သူတို့ အမေရိကန်ရဲ့ အထွေထွေသမိုင်းနော်)။ ခု ကမ္ဘာ့ ခေါင်းဆောင်နိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ လှုပ်ရှားပြောင်းလဲမှုတွေ ၊ အကွက်ရွှေ့ မှုတွေကို မျက်ခြေမပြတ်ရင် တွေးမိမှာပါ။ ကုလ က အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဘန်ကီမွန်းဆိုတာလဲ နယူးယောက် မှာရှိတဲ့ ကုလ ဌာနချုပ် စားသောက်ဆိုင်တန်း က ဆူရှီသည်လောက်တောင်
သြဇာရှိတာမဟုတ်ဘူး။အဲသလိုပြောလိုက်လို့ဘန်ကီမွန်း ကို ခေါင်းမှာ ဂျပန်စာရေးထားတဲ့အ၀တ်ဖြူကြီးစည်းလို့ဆူရှီ လိပ်တဲ့ဂျပန်ရိုးရာ တောသားတွေဝတ်တဲ့ ကီမိုနို တပိုင်းနဲ့အေပရွန်ကြီး ချိတ်ပြီး ဓါးတလက်နဲ့စပ်ဖြဲဖြဲ ငါးလှီးနေတယ်လို့တော့မျက်စိထဲမမြင်လိုက်ပါနဲ့။
စကားကိုပြန်ဆက်ရရင် အမေရိကန် စတော့ခ် ဈေးကွက်ရဲ့ ကပြောင်းကပြန်ဖြစ်နေမှု မတည်ငြိမ်မှု ၊ ရွှေ အပါအ၀င် အဖိုးတန် သတ္တုဈေးနှုန်း ၊ လောင်စာဆီ ၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ၊ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ အိမ်ခြံမြေ လုပ်ငန်းတွေရဲ့ sector တစ်ခုခြင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင် အမေရိကန်ဟာ ကမ္ဘာ့အလည်မှာအထည်ကြီးပျက်ဖြစ်နေတာ
ဖြစ်တယ်။ အဲဒီ အထည်ကြီးပျက်ဘ၀ကနေ ငမွဲတွေ ကို ငွေတိုးချေး အပေါင်ခံ အမြတ်ယူတဲ့အလုပ်ကို ပါးပါးလေး ပြောင်းယူနေတဲ့ နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တယ်။ သူ့ မှာ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းနဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာအရ နံပါတ်တစ်လို့ ကမ္ဘာမှာပြောလို့ ရပေမယ့် စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး ၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ factors တွေက ဥရောပ ဘုံအဖွဲ့
တပြိုင်နက်တည်း တရုတ် နိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယ နိုင်ငံ နဲ့ အာစီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ အလုအယက် ထိုးတက်လာတဲ့ တိုးတက်မှုတွေ ကို လည်းသူမြင်နေရတယ်။ ဒီတော့ အမေရိကန် မှာရှိတဲ့ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးရာ နဲ့အတူ အမေရိကန် တောက်လျှောက်တင်လာတဲ့ လူ့ အခွင့်အရေးအလံကို မသိမသာ မိတ်ကပ် လိမ်းအရောင်ပြောင်းရတဲ့ဘ၀ကိုရောက်လာတယ်။
အာဖဂန် စစ်ပွဲဟာ အီရတ်စစ်ပွဲနဲ့ မတူပါဘူး ။ အီရတ်စစ်ပွဲဟာ သဲကန္တာရ ထဲမှာဖြစ်တဲ့မြေပြန့်စစ်ပွဲပါ။ အီရတ် ရဲ့ တပ်မတော်ဟောင်းဟာ လဲ အာဏာရှင်ရဲ့တပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီတော့ အာဏာရှင်တွေရဲ့ စစ်တပ်တွေက တပ်သားတွေဟာ တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်စိတ်မရှိတဲ့ စိတ်ဓါတ်ပျက် တပ်မတော်ဖြစ်လေတော့ အမေရိကန်ဟာ သူ့ရဲ့ FIREPOWER ကို ကောင်းကောင်း
အသုံးချပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်း ဘက်ဂဒက်ကို ၀င်သိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်။ လူ့ အခွင့်အရေး အလံကို အမြင့်ဆုံးလွှင့်ထားတဲ့အမေရိကန်ဟာ သုံ့ပန်းတွေကို လိင်စိတ္တဇဝေဒနာသည်ဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေနဲ့ အဆိုးဆုံးလူ့ အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အီရတ် ပြည်သူလူထု အသိဆုံးပါ ။ သို့ သော်အာဖဂန် ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေအထားနဲ့ အာဖဂန် လွတ်မြောက်ရေး
သမားတွေရဲ့ ရပ်တည်မှုက အီရတ်နဲ့မတူပါဘူး ။ ဒီတော့ အမေရိကန် တပ်မတော်ဟာ အာဖဂန် မှာ ခုထိ လက်နက် အင်အား နည်းပညာ အင်အားသာသော်လည်း နှာခေါင်းကျည်ပွေ့ တွေ့ နေတုန်းဖြစ်ပါတယ်။တပြိုင်နက်ထဲမှာ အီရတ်မှာ ပြန်ထကြွလာကြတဲ့ ဘာသာရေးအလံထူထားတဲ့ခုခံတော်လှန်သူ အင်အားစုတွေဟာလဲ နေ့ စဉ်နဲ့အမျှ အားကောင်းလာသလို
နည်းဗျူဟာလည်းကြွယ်ဝလာတာတွေ့ ရပါတယ် ။ အမေရိကန်တပ်မတော် အီရတ်က အကုန်ပြန်ဆုတ်ပြီး လေးနှစ်အတွင်း ပြည်တွင်းစစ်ကြီးတခုထပ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အာဖဂန် ပြသနာနဲ့ အီရတ်ပြသနာကို အမေရိကန် နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီကြီးနှစ်ခုလုံးကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ သူတို့ သုံးခဲ့တဲ့ စစ်စားရိတ်တွေနဲ့ အမေရိကန်ဟာ အထည်ကြီးပျက်ဖြစ်လာရတာလဲ
တရုတ်၊ ကုလား ၊ အိုဘားမား နှင့် အမေရိကန် ပေါ်လစီ
ဒီတော့ အမေရိကန် က အိုဘားမားရုံးအဖွဲ့ ဟာ နအဖ နဲ့အင်မတန် ပတ်သက်စကားပြောချင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့သယံဇာတ နဲ့လူသားအရင်းအမြစ်ဟာ အမေရိကန်လိုနိုင်ငံအတွက် ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မက်လောက်စရာမရှိပေမယ့် ဒေသန္တရ ဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာမြောက်မှုကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အခင်းအကျင်းတွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံက ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ရေပြင်ကြီးကို ပြိုင်ဖက်မရှိလွှမ်းမိုးထားနိုင်တဲ့အမေရိကန် ဟာ မြန်မာနိုင်ငံလို တိုင်းပြည်ကို မွေးစားလိုက်ခွင့်ရရင် သူ့ ရဲ့ အဆင့်နေရာနဲ့ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို ပို ချဲ့ ထွင် နိုင်လာမှာဖြစ်သလို တရုတ်နဲ့အိန္ဒယ ကိုလည်း အချိန်မရွေး လှမ်းထောက်ထားလို့ ရတဲ့ အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။
တဖက် က တရုတ်ဟာ ကွန်မြူနစ်ပျက် နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားဆိုရှယ်လစ် လမ်းကိုသွားနေတဲ့ နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီဦးဆောင်တဲ့ လူရိုက် ၊ ထမိန်ရုပ်၊ ဇိမ်ခန်းထောင်၊ လူမိုက်မွေး ၊ ပစ္စည်းသိမ်း၊ လောင်းကစားရုံထောင် တဲ့ မဟာဗျူဟာကြီးတွေနဲ့ စစ်အာဏာရှင်နိုင်ငံငယ်လေးတွေမှာ အလကားမတ်တင်းနဲ့ သွေးစုတ်နေတဲ့
တရုတ်ဖက်က ပြန်မေးစရာတွေရှိလာပါလိမ့်မယ် ။ ဒါဆို တခြား ထိုင်းတို့ အိန္ဒိယတို့ က ၀င် ပြီးအမြတ်ထုတ်တာကျတော့ အိုကေတယ်ပေါ့ ဟ လား.... ဟု မေးလာနိုင်ပါတယ်။ မအိုကေပါဘူး .....။ သို့ သော် ကွန်မြူနစ် အလံ ထူထားတဲ့ တော်လှန်တဲ့ ပါတီတရပ် ဦးဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံဟာတော့ အဲသလောက် အောက်တန်းမကျသင့်ပါဘူးဆိုတဲ့
အမြင်နဲ့ ဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်။
စကားကို ပြန်ပြီး အစသပ်ရမယ်ဆိုရင် Jim လာတာဟာလဲ သူ့ အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်တယ်။ မြောက်ကိုရီးယား ကိစ္စကို တဖက်လှည့်နဲ့ မြန်မာ စစ်တပ်ကိုသုံးပြီးထောက်လှမ်းရေးအချက်အလက်တွေ လာယူတာပဲ ဖြစ်တယ်။ တဖက်က ယက်တော ကို ပြန်ခေါ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သံတမန်ရေးအောင်မြင်မှုကိုအကြောင်းပြတာလဲဖြစ်တယ်။ ဒါဟာလဲ stereotype ပါပဲ
impress ဖြစ်လောက်စရာမရှိပါဘူး ။ ဇရက်တောင်ပံကျိုး က စောင့်နေတုန်း ကြောင်ခံတွင်းပျက်က ရောက်လာတာပါပဲ ။
အကျဉ်းချုပ် အချက်အလက်အနည်းငယ်ကိုဆွေးနွေးပါမယ်။ မိတ်ဆွေများ လည်း မပျင်းအောင် ကျနော်လဲ လက်မညောင်းအောင်ပေါ့။
စကားကိုဆက်ရမယ်ဆိုရင် ဒေသဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုတွေအစပျိုးဖို့ အတွက်
လာတဲ့ သံခင်းတမန်ခင်းလဲဖြစ်တယ်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကို မြန်မာပြည်သူလူထုကြီးကလွဲလို့တကမ္ဘာလုံးက ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကိုပဲကြည့်တဲ့ နိုင်ငံတိုင်းက အဆင်ပြေစေချင်ပါတယ်။ ဖြစ်မြောက်စေချင်ပါတယ်။ နအဖ စစ်အာဏာရှင် ထာဝရ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တည်ရှိ အနိုင်ကျင့်နေတာသူတို့ အတွက်ပြသနာမဟုတ်ပါဘူး ၊အဲဒီပြသနာက ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ အတွက်ကတော့ ဘာဖြစ်ဖြစ် ဒီမိုကရေစီမျက်နှာဖုံးစွပ်ထားတဲ့ အသင်းအဖွဲ့ဆိုရင် နောက်မှာ မာဖီးယား ပဲ ရှိနေရှိနေ ၊
သူတို့အနေနဲ့အသိအမှတ်ပြုဆက်ဆံ အမြတ်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တောင်အမေရိကား နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ အစိုးရကို ပြန်ဆန့် ကျင်တဲ့သူပုန်တွေကို အမေရိကန်က အထူးတပ်ဖွဲ့ တွေပို့ ပေးပြီး ကူခဲ့ဖူးပါတယ်။
ရွာလုံးကျွတ်ကိုလည်း မီးရှို့ သတ်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။ အမေရိကန်ဆိုတာဟာ တကယ်တော့ သူတို့ ဟာသူတို့ လူ့ အခွင့်အရေးအလံထူပြီး ကမ္ဘာပတ်ပြီးရမ်းနေတဲ့လူယဉ်ကျေး ၀တ်စုံထဲက မာဖီးယားနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ သူတို့ အမေရိကန်ဟာ တရုတ်တွေလိုပဲ သူတို့ တိုင်းပြည်အတွက် ကမ္ဘာ့မြေပုံပေါ်က တက္ကဆက် အရွယ်အစားလောက် မြန်မာပြည်လေးမှာဆင်းရဲ မွဲတေ စုတ်ပြတ်နေတာတွေ ၊ လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွ အားလုံးသောယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းကျခံနေရသူတွေ
အဲသဟာတွေကို တကယ်တန်း သူတို့ရဲ့ algorithm မှာ ထည့်တွက်ထားတာမဟုတ်ဘူး ဒီတော့ သူ့ အလုပ်သူလာလုပ်ပြီး သူ့ အကျိုးစီးပွားအတွက် အပြန်အလှန်အာမခံချက်တွေပေးဖို့ လာတာယူဖို့ လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ မြန်မာလူမျိုးများလဲ မျှော်ရပေါင်းများလို့လည်ပင်းညောင်ရေအိုးတွေဖြစ်နေကြပါပြီ။ မမျှော်ပါနဲ့ ၊ အမေရိကန်လာသွားပြီး သူ့ လူ သူခေါ်ထုတ်သွားလို့ လဲ ဒေါသမဖြစ်ပါနဲ့ ။ သူ့ ကိစ္စသူလုပ်တာပါ ။ ကျနော်တို့ ကိစ္စကတော့ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ကြီး သက်ဆုိးရှည်မယ့်ကိစ္စမှန်သမျှ ကို ဆန့် ကျင်နိုင်တဲ့ နည်းနဲ့ ဆန့် ကျင်နိုင်သလောက်ဆန့် ကျင်သွားကြဖို့ပါပဲ။
၂၀၁၀ မဖြစ်ဘူး မပြောနိုင်သလို ဖြစ်မယ်လဲ တထစ်ချမပြောနိုင်ပါဘူး။ ခုလောလောဆယ်မှာ မြန်မာ့မြေပုံကို မြင်ယောင်ကြည့်ပါ မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့ တွေ နဲ့ စစ်အာဏာရှင်အစိုးရကြားမှာတင်းမာနေပါတယ်။ အဲဒီတင်းမာမှုကို နအဖ ဟာ ယာယီ အနေနဲ့ပြန်လျှော့ဖို့ ကြိုးစားမှာပါ ။ ရဟန်းသံဃာတွေဟာ ခုဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အဘ ဦးတင်ဦးတို့ နဲ့မခြား သူတို့ သီတင်းသုံးတဲ့ကျောင်း သင်္ခန်းတွေမှာ အနှစ်သာရအရ အကျယ်ချုပ် ကျနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အကျယ်ချုပ်ကျနေတဲ့ရဟန်းသံဃာပေါင်း လေးသိန်းကျော်ရှိပါတယ်။ တပ်မတော်ကို စိတ်ပျက်ပြီး လတ်တလောအခြေအနေတွေ ဆုံးပါတော့လို့ဆုတောင်းနေကြတဲ့တပ်မတော် က အရာရှိအရာခံအကြပ်တပ်သားတွေဟာလည်း သိန်းနဲ့ချီရှိပါတယ်။
အလယ်တန်းကနေ တက္ကသိုလ်အထိ တက်နေတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်း သန်းချီရှိပါတယ်။
နအဖ စစ်အာဏာရှင်ကို မကြောက်ချင်တော့တဲ့ အဲဒီ ဘ၀ဆိုးကြီးကို
ခါးသီးနေ တဲ့ပြည်သူလူထုတွေကလေးဆယ့်ကိုးသန်းခွဲလောက်ရှိပါတယ် ။ ကျန်တဲ့ နအဖ နဲ့ပတ်သက် ပြီး အဆင်ပြေနေတဲ့ သူတွေ ၊ နအဖ အမာခံတွေက လွဲလို့တကယ်တန်း က အားလုံးသော အသက်ရှင်ရပ်တည်နေသူအပေါင်းက စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကြီးကို မလိုချင်တော့ပါဘူး။
ထို့ အတူ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ဟာ လည်း ရှိနေသေးသလို ၊ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တကွ ထောင်ထဲ မှာ ထည့်ထားခံရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရှိနေပါသေးတယ်။ မူလတန်းအဆင့် ဓါတုဗေဒ စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ မှာ အောက်ဆီဂျင်တွေလဲရှိနေတယ် ဟိုက်ဒရိုဂျင်တွေလဲရှိနေပါတယ်။
မှန်ကန်အချိုးညီ တဲ့ ပေါင်းစပ်ချက်နဲ့သာ ပေါင်းစပ်လိုက်ရင် အင်မတန်ကြီးမားတဲ့မိုးသက်မုန်တိုင်းနဲ့ပင်လယ်ကြီးတွေ နေ့ ချင်းညချင်းဖြစ်လာပြီး အဲဒီကတဆင့် ကြီးမားတဲ့ဆူနားမိလှိုင်းလုံးကြီးတွေနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဖြိုဖျက် ရှင်းလင်းပစ်နိုင်မှာပါ။
နောက်ဆုံးတခု ဆွေးနွေးချင်တာကတော့ ထိုင်းနယ်စပ်နဲ့တကွ နိုင်ငံတကာရောက်ရှိနေကြတဲ့ဆရာသမားများက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အတိုက်အခံ အတိုက်အခံဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေ ကို လှိုင်လှိုင်သုံးနေသလို သတင်း ဌာနတွေ ကလည်း အတိုက်အခံဆိုတဲ့စကားကိုသုံးနေတာတွေ့ ရပါတယ်။
ဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့အတိုက်အခံလို့အသိအမှတ်ပြု ပြီးသုံးလာကြသလဲဆိုတာတော့ ကာယကံရှင်တွေပဲသိမှာဖြစ်ပါတယ်။ NLD အတွက်လဲ အတိုက်အခံမရှိသေးပါဘူး ။ ပြည်ပ ကလူတွေအနေနဲ့လဲ အတိုက်အခံဆိုတာတကယ်တော့မဟုတ်လှပါဘူး။ နအဖဟာလည်း လွှတ်တော်မှာ တရားဝင် လူထုရွေးကောက်တင်မြှောက်မှုနဲ့ အာဏာရလာတဲ့
တရားဝင်အဖွဲ့ အစည်းလဲ မဟုတ်ပါဘူး ။ အတိုက်အခံဆိုတာ လွှတ်တော်တွင်း ဟိုဘက်ခြမ်းဒီဖက်ခြမ်း ထိုင်ပြီး မူ တခု ပေါ်လစီတစ်ခု အပေါ်မှာ နိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာအရေးအရာတစ်ခုပေါ်မှာ ကိုယ် ယုံကြည်ရာ ကိုယ် ကိုင်စွဲရာ ပေါ်လစီ အတွက် ရပ်တည် ဆွေးနွေးပြီး ကိုယ့် မူ ကိုယ့်ပေါ်လစီ ကို အာမခံသူတွေကို ခေါ်ပါတယ်။
အတိုက်အခံရော အာဏာရ ပါတီရောဟာ တနည်းတဖုံ လူထု ကို သူ့အဓိပ္ပါယ်နဲ့သူကိုယ်စားပြုပါတယ်။
နှစ်နှစ်ဆယ်ဆိုတဲ့ ကာလအတိုင်းအတာကလေးက ပကတိအဖြစ်မှန်တွေကို မှုန်ဝါးသွားလောက်အောင် မစွမ်းနိုင်ပါဘူး ။ Illusions တွေကို မျက်စိမှိတ်ပြီး ဒါဟာတော့ reality ပဲလို့လူထုကိုဝိုင်းညာဖို့ မကြိုးစားသင့်ပါဘူး။ညာနေကြတာကိုလဲ လူထုက စိတ်ပျက်လက်ပျက် နဲ့ ရွံ ရှာတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာပါ။
တကယ့်အနေအထားမှာက ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ရဲ့အရေးအရာမှာ အတိုက်အခံဆိုတဲ့ ဝေါဟာရ ကို သုံးဖို့ ရာတော်တော်ဂွကျပါတယ်။
NLD ပါတီဟာ ပြည်သူလူထုကို ခုထိ ကိုယ်စားပြုနေတုန်းဖြစ်သလို နအဖဟာလည်း ခုအထိ ပြည်သူလူထုကို အဓမ္မ နိုင်ထက်စီးနင်းပြုလုပ်နေတဲ့အင်အားစုဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ပ နဲ့နယ်စပ်ကိုရောက်လာကြတဲ့ သူတွေဟာလည်း စစ်အာဏာရှင်ကို တနည်းတဖုံဆန့် ကျင်နေကြတဲ့ဆန့် ကျင်ရေးသမားတွေဖြစ်ပါတယ်။
တော်လှန်ရေးသမားလား အတိုက်အခံလား ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘာမှန်းမသိကြတော့တဲ့အခါ အတွေးအခေါ်ရှုပ်သွားတဲ့အခါ နအဖ ဆီက သနားသမှုနဲ့ပေးများပေးလာမလားဆိုတဲ့ ကုလားထိုင်ကိုမျှော်တော်မူတဲ့စိတ်ဓါတ်တွေဟာ အဲဒီက လဲ တနည်းအားဖြင့် ဖြစ်တည်လာပါတယ်။
ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးအတွေးအခေါ်ရှင်းအောင် ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြင့် နအဖ စစ်အာဏာရှင်လား ၊ နအဖ စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ အကိုင်းအခက်လား ၊ နအဖ စစ်အာဏာရှင်နဲ့ အခြေအနေတစ်ခု ကို အတူ ဖန်တီးယူနေကြသူတွေလား ဆိုတာနဲ့ ဒီဖက်က ဆရာများလဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တော်လှန်ရေးသမားလား၊
နိုင်ငံရေး အမှတ်တံဆိပ်တပ်ထားတဲ့ ကော်ပိုရေးရှင်းပိုင်ရှင်တွေလား ၊ နအဖ စစ်အာဏာရှင်နဲ့ ဝေစားမျှစားအတွက် သွားရေတမြားမြားကျ အမြီးနှုန့် တအီအီအသံပေး ခေါင်း ကလေးတွေ ကို တိုးဝှေ့ ပွတ်သပ်ပြီး ထိပ်ပုတ်ခေါင်းပုတ်ခံရေးအတွက် စွမ်းစွမ်းတမံကြိုးစားနေသူတွေလားဆိုတာကိုတော့ ပြန်ဆန်းစစ်ကြဖို့ နောက်မကျသေးဘူးဆိုတာ
အသိပေးရင်း ကျနော့်ဆွေးနွေးချက်ကို ဒီမျှနဲ့ဆယ်မိနစ်စာဆွေးနွေးပြီး နိဂုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်။ပြောရမယ်
ပြင်ရမယ် တွက်ချက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ ကုန်နိုင်ဖွယ်မရှိသလို ဆက်လက်လဲလုပ်ဆောင်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ အသည်းဘ၀င်က ဆဲချင်လှသော်လည်း မိတ်ဆွေများ၏ စိတ်အနေအထား ညိုးလျော်မည်စိုးသဖြင့် မိုးပေါ်ကိုသာ မော့ကြည့်ရင်း သီချင်းတပုဒ်ဖြင့်နားရင်းအုပ်ချင်စိတ်အားဖျောက်ထားကာ ထောက်ထားညှာတာမှုအနည်းငယ်ဖြင့် ယခုဆောင်းပါးအား ရေးသားလိုက်ပါသည်။
Posted by ☺ at 2:20 PM3comments
ဂေါပက ဘောမ များနှင့် အနာဂတ် မြန်မာပြည်
ကျွန်ုပ် သည် ဆရာတော်ဘုရားကြီး ၏ ကျောင်းတော် ၀ိဟာရ်မှ အ၀တ်တစ်ထည်ကိုယ်တစ်ခု ဖြင့် ထွက်ခွာလာခဲ့ သူဖြစ်၏။
ကျွန်ုပ်၏ ခရီးမစမှီ တွင် ဆရာတော်ဘုရား အားခြေဆုပ်လက်နယ်ပြုပေးပြီးသကာလ ၊ ကျွန်ုပ်၏ ခရီးလမ်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး တင်လျှောက် အသိပေးလိုက်၏။
ဆရာတော်ဘုရားက မည်သည့် စကားတစ်စုံတရာမှ မိန့် ကြားတော်မမူခဲ့။
ထို ညနေ ခင်း မှောင်ရီ ဖြိုးဖျတွင် ဆရာတော့် ကို ဦးချ ၀တ်ပြု၍ တိတ်ဆိတ်စွာပင် ထွက်ခွာလာခဲ့၏။
ကျွန်ုပ်၏ လမ်းခရီးတလျှောက်တွင် မေတ္တသုတ်ကို ရွတ်ဆိုခြင်း မောရသုတ်ကို ရွတ်ဆိုခြင်း ပဌာန်းဒေသနာကြီးအားရွတ်ဆိုခြင်းဖြင့် လိုရာသို့ချောမောဆိုက်မြိုက်စွာ
တောပန်းတောင်ပန်းကလေးများ ကို ခူးကာ ၀ါးဆစ်ဘူးကလေးထဲ တွင်ထည့်လျှက် မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအား မနောညွှတ်အာရုံပြုပြီး
'ယသာနုဘာဝတော ယက္ခာ.....' အစရှိသဖြင့် ရွတ်ဆို သရဇ္ဖယ်ပြီး လင်းအားကြီး မနက် လေးနာရီတွင် ဘုရားဝတ်ပြု၏။
ရင်ဘတ်တွင် စွန်းလွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး ဓါတ်ပုံလေးအား ပလတ်စတစ်လောင်းကာ အ၀တ်ကြိုး ကလေးဖြင့် ဆွဲထားသော ကျွန်ုပ် မောင်တုတ်ကြီးသည်
ညာဘက် ပုခုံးတွင်လွယ်ထားသော မောင်းပြန် သေနတ်ကြီးဖြင့် တော အလည်တွင် မောတယ် မငြီးနိုင်အား။
လှုပ်ရှားစစ် ၏ သဘောသဘာဝအတိုင်း နေ့စဉ် စစ်ကြောင်းလျှောက်ရ၏။ညီရင်းအကိုသဖွယ် ဖြစ်သော ယုံကြည်ချက်တူ ဘ၀တူ ဖြူစင်သော ရဲဘော်ရဲဘက်
များဖြင့် တသွေးထဲ တသားထဲ လက်ရေ တပြင်ထဲ ရှင်သန်ခဲ့၏။ တိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုလဲ အပင်ကောင်းကောင်း နောက် တွင် ပုန်းလျှက် ချောင်းကြည့်ခဲ့ဖူး၏။
ခံစစ်ကုန်းတိုက်ပွဲများတွင်လည်း အခြေအနေမကောင်းလျှင် ထပြေးရန်အတွက် အမြဲ အသင့်ဖြစ်ခဲ့ဖူး၏။
ကျွန်ုပ် မောင်တုတ်ကြီးသည် ဘုန်းကြီးကျောင်းပညာရေးဖြင့် သဂြိ င်္ုလ် တန်း နှစ်နှစ်ကျလောက်အောင် ညံ့ဖျင်းသော်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့ ဓမ္မကထိက
လောက် စိတ်နေမြင့်သူဖြစ်၏။တိပိဋကဓရ တစ်ဦးလောက်လဲ ကုံလုံကြွယ်ဝသူဟု အထင်ရှိ၏။
အမြဲတန်းပြုံးပြုံးကြီးနေကာ မေတ္တာ ၊ ကရုဏာ ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာ ဖြင့် ဗြဟ္မစိုရ်တရားလက်ကိုင်ထားကာ နှိမ့်ချ နားလည်တတ်သော သူဖြစ်၏။
ယင်းကဲ့သို့ သော တုတ်ကြီးဆိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ်သည် အဘယ်အကြောင်းကြောင့်များ ဖရုဿဝါစာ ကြမ်းတမ်းယုတ်ပတ်သော စကားများအား ပြောထွက်ရလေသနည်းဟု
ဆရာတော်ဘုရားသာ သိခဲ့လျှင် သံဝေဂဖြင့်သာ ဆင်ခြင် တွေးတောလိမ့်မည်ဖြစ်ပေ၏။
ကျွန်ုပ် တွင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ရန်သူ မရှိ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကြောက်တတ်သည့်နေရာတွင် ယုန် ပေါက်စ က စိတ်ပျက်ရလောက်အောင် ဖြစ်၏။ စကားလည်း တနေ့လုံး နေ၍မှ တလုံးမပြောသည့်အတွက်
သာလိကာ စိတ်ပျက်ရသော သတ္တ၀ါ တကောင်ဖြစ်ပြန်ပေ၏။
၁၉၈၈ ခုနှစ် တွင် ကျွန်ုပ် ဘုန်းကြီးကျောင်းသား ကလေး မောင်တုတ်ကြီး၏ နုနယ် ငယ်ရွယ်သော အသည်းဆိုင်ကို မွမွခြေလိုက်သည့် ဖြစ်စဉ်များ ကြောင့် လူမမယ် မောင်တုတ်ကြီး လေး တယောက်
ဆရာတော်ဘုရားနှင့် တောရ ကျောင်းကလေးကို လမ်းခွဲ၊ ဆီဦးထောပတ်ခဲဖွယ်ဘောဇဉ်များကို နောက်ချန်ရစ်၊ ခပ်ခွာခွာက တဖက်သတ် ချစ်ရသော ဘုတ်ဆုံကို ပစ်ခွာ၊ ထိုကဲ့သို့သော ဘ၀နှင့်မတန်သည့်
စွန့်လွှတ်ခြင်းများအား ကိုယ့်သဘောနှင့်ကိုယ် လက်ခံခဲ့ပြီး မည်သည့်အခါတွင်မှလည်း ငါ ကတော့ စွန့် လွှတ်လာတာလကွယ့်ဟု လူကြားထဲရောက်တိုင်း ထထ အသံကောင်းမဟစ်။
ကျရာနေရာ မှ တာဝန်ပေးရာကို မခိုမကပ် ၊ မငြီးမငြူ ပဲ နေထိုင် လိုက်နာခဲ့သည့် အညတရ ကလေးတယောက်ဖြစ်ခဲ့၏။
သို့သော် အနှီ မောင်တုတ်ကြီးဆိုသည့် လူငယ်ကလေးဘ၀မှလာသည့် ယခု မောင်တုတ်ကြီးသည်ကား အဘယ်အကြောင်းကြောင့်ပီယ၀ါစာစကားများ
အားမဆိုတတ်မပြောတတ်တော့လောက်အောင်ဖြစ်ရသနည်းဟူမူ..အကြောင်းရင်းကား ဤသို့ တည်း.....
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ၊ NLD အပြတ်အသတ်နိုင်၏။ အမတ်များ နယ်စပ်ထွက်လာ၏။ ပြည်ထောင်စု အစိုးရ ဖွဲ့၏။ နှစ်လမကြာခင် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးသန်းကြွယ် တယောက် ရွှေတောင်ခြေမှာနေရစ်တော့... ဆိုသည့် သီချင်း ကို ညည်းကာ
ပြန်ပြေးတော့၏။ ဒေါက်တာစိန်ဝင်းတက်လာ၏။ အဲသည်တုန်းကတော့ တုတ်ကြီးတို့မှာ အားကိုးလိုက်ရတာ မျှော်လင့်လိုက်ရတာပေါ့ တို့ အစိုးရကြီးပေါ့........။
ဥက္ကဌ ရဲဘော်နိုင်အောင်ကလဲ ဇာတိစပြ ၏။ ရန်သူကိုစိတ်နာအောင်လုပ်နဲ့ ... ဟွန့် ... ဆိုပဲ။
၁၉၉၄ ကာလတွင် ကား များလှစွာသော ကျန်ရှိနေသည့် အဖွဲ့ အစည်းများ စစ်အာဏာရှင်နှင့် အပစ်အခတ်ရပ်ဆဲ၏။ ၁၉၉၅ နောက်ပိုင်းကာလ မာနယ်ပလောကျ၏။အဖွဲ့အစည်းအားလုံး ဖရိုဖရဲအဖြစ်ဆုံးထဲတွင် မ.က.ဒ.တ လို ကျောင်းသားအဖွဲ့ အစည်းအတွက်
အထိအနာဆုံးဖြစ်၏။ ကျန်အဖွဲ့ အစည်းများလည်း အထိနာကြသည်မှာပြောဖွယ်မရှိ ။ သို့ သော် မ.က.ဒ.တ အထိအနာဆုံးပြောရသည်မှာ ကား မိမိတို့ ရှိနေပြီးသော တပ်ရင်းများ သည်ကား အပစ်အခတ်ရပ်ဆဲလိုက်ပြီဖြစ်သော တိုင်းရင်းသား တို့၏ နယ်မြေများတွင်
၁၉၉၆ ကျောင်းသားများ ၏ အရေးတော်ပုံဖြစ်ပေါ်၏။
၁၉၉၈ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အားမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ခရီးတွင် စစ်အာဏာရှင်က ပိတ်၏။
၂၀၀၃ တွင် ဒီပဲယင်းအရေးအခင်းဖြစ်ကာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တကွ အတူပါလာသော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၀င်များအား လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုဖြစ်၏။
၂၀၀၇ ခုနှစ် သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်တို့၏ ကျက်သရေရှိလှသော ဦးပြည်းစိမ်း များအား ၀ါးရင်းတုတ် ဆင်းသက်တော်မူ၏။သံဃာတော် အလောင်းများ ဒေါပုံ ချောင်း ၊ လှိုင်မြစ်ဝတို့တွင် ပေါလောပေါ်၏။ သံဃာ့ အာဇာနည်တို့အား ထောင်သွင်းအကျဉ်းချ ရိုက်နှက် ကန်ကျောက်၏။
၂၀၀၈ ခုနှစ် နာဂစ် မုန်တိုင်းတိုက်၏ ။ လူနှစ်သိန်း ကျော် နေ့ ချင်း ညချင်း သေဆုံးခဲ့သည်မှာ နတ်စိမ်းလောကတွင် ရှန်ပန်းနီ ပင် ဈေးဆယ်ဆ ခုန်တက်သွားသဖြင့် မနှဲလေးတို့ အထည်ဆိုင် အင်မတန်အလုပ်ဖြစ်သွား၏။
ထို ၂၀၀၈ နာဂစ်မုန်တိုင်းကာလကြီးတွင်ပင် နအဖ စစ်အာဏာရှင်က နိုင်ငံတကာ အကူအညီများအား လက်မခံယုံမက ရလာသော အလှူများကို သူတို့ အမည်သညာကပ်ကာ ပဏာဝင်ယူသေး၏။ ထို့နောက် ယင်းတို့ရေးဆွဲထားသော တဖက်သတ် လမ်းပြမြေပုံနှင့် အခြေခံဥပဒေ ကို
လိမ်ညာ အတည်ပြု ခဲ့၏။ယခု တဖန် ယက်တောဆိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းပြ၍ မတရားဖမ်းဆီး အနိုင်ကျင့်ချုပ်နှောင်ထားခံရသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖမ်း၏။ တရားစွဲ၏။ ထပ်မံ၍ မတရားစီရင်ချက်ချယုံမက ၊ "ဘ .. က တူမကြီးကို တနားယို့ "ဆိုသော အထာဖြင့်
အရှက်မရှိ လုပ်ပြန်၏။ ဒီကြားထဲ ရှစ်လေးလုံးနှစ်ပတ်လည် တွင် ဂျကာတာ ညီလာခံကြီးဆိုသည့် စာတမ်းများထွက်လာယုံမက ထိုအဖွဲ့ က ကိုမောင်မောင်တို့ ရေဒီယို တွင် NCUB ကို ကိုယ်စားပြုကာ အင်တာဗျူးသွား၏။
ကုလသမဂ္ဂမှ မြန်မာစစ်အာဏာရှင်အား ထိုင်ခုံသိမ်းရေး တုန်းက လေသံကတမျိုး ၊ ခု ကျတော့တမျိုး ။ နောက်တခါ NCUB ကိ်ု ကိုယ်စားပြုသော သူတယောက်၏ တရားဝင်စကားဖြစ်ပေ၏။
NCUB ဆိုသည့်အဖွဲ့ ထဲတွင် ပါသော အဖွဲ့ အစည်းများ အား ပြန်လည်လေ့လာပါ။ ကျောင်းသားတပ်မတော် ကအစ ပါဝင်နေသည်ဖြစ်၏။ ထိုကျောင်းသားတပ်မတော်၏ လက်ရှိ ဥက္ကဌ ရဲဘော်သံခဲတို့နှင့် လက်ရှိဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီက ထိုကိစ္စအား သဘောတူပါသလား ။
ကိုမောင်မောင်နှင့် ထပ်တူ သဘောထားရှိပါသလား ။ ဖထီးတို့ အဖူး တို့ ၏ ကရင့် တော်လှန်ရေးကရော ... ထိုကိစ္စတွင် သဘောတူညီမှုရှိပါသလား။
ဒပ်ဘလင်ညီလာခံဆိုသည့် ညွန့် ပေါင်းအစိုးရ၏ ညီလာခံသို့ အဖွဲ့အစည်းများစွာတက်ရောက်ကြ၏။ ထိုတက်ရောက်ခဲ့သော ကာယကံရှင်တို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သိကြမည်ဖြစ်၏။
ထိုသူများကရော တသဘောထဲရှိပါသလား။ ရှိလျှင်တော့ မည်သည့် တုန့် ပြန်မှု မှ ထွက်လာမည်မဟုတ်။ ဒီတော့ ယခု ကိစ္စတွင် ကျွန်ုပ်တုတ်ကြီး ဆဲခဲ့ခြင်းသည် ကား ရိုင်းသည်မှန်သော်ငြား နည်းပါသေး၏။
ဘာကြောင့်ဆဲသနည်း ။ သေသေချာချာ political development life cycle , trending, probability, scope , hypothesis များဖြင့် ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးရင်ရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလား.....ဟု မေးစရာရှိ၏။
ထိုကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်က ကျကျနန data, graph, time line များနှင့် ဆွေးနွေးလာလျှင်လည်း ထိုသူများက သူတို့၏ လက်ကိုင်ဘုတ်အုပ်တော်ကြီးများဖြင့် လိုချင်သော အပိုင်းအစကလေးများအား ဖြတ်ညှပ်ကပ်ကာ မခိုင်လုံသော ဆင်ခြေများဖြင့်သာ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသား ရေးပြဿနာကို capitalize လုပ်ဦးမည်ဖြစ်၏။ စားတော့ ၊ နေတော့ ၊ တိုင်းရင်းသားများ ကျွေးတာ ၊ ပေးတာဖြင့် ပြီးတော့ တိုင်းရင်းသားများနှင့် အဖိနှိပ်ခံပြည်သူလူထုအား နားလှည့်ပါးရိုက်ကာ အသံကောင်းဟစ်ရင်း ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကို နောက်ကျောဓါးနဲ့ ထိုးဖို့ ကြံ၏။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောသည့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဆိုသည်မှာ မောင်မောင်တို့စိန်ဝင်းတို့ လုပ်မည့် လုပ်ဟန်မဟုတ်။ အနှစ်သာရမဟုတ်။ ချဉ်းကပ်နည်းမဟုတ်။
သိက္ခာရှိ၊ တရားမျှတ၊ ယုံကြည်မှု ပြည့်ဝ ၊ ခွင့်လွှတ်နားလည် နွေးထွေးမှုရှိသော စစ်မှန်သည့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဖြစ်၏။
အခွင့်အရေးသမားများ၊ မျက်နှာဖြူကြီးများ၏ အလိုတော်အရ ကပြနေကြသော ၊ proposal politics ဖြင့် စိုပြေ ကြွယ်ဝနေသော လက်တဆုပ်လောက် ရှိသည့် လူတွင်ကျယ်များက ယခုကာလကဲ့သို့ တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုး ၊ အနာဂတ် မြန်မာ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ တပ်မတော်နှင့်အမျိုး ဘာသာ ၊ သာသနာ အကျိုးကို ထည့်တွက်မှုပင် အရင်းခံအရ လုံးဝ မရှိသည့် ကုလားထိုင်မျှထိုင်ရေး ကိစ္စရပ်အား သြဘာပေးရမည်ဆိုလျှင်တော့ ကျန်ရှိနေသေးသည့် အဖွဲ့ အစည်း များ ကိုယ်စီဖွဲ့ ထားကာ နောက်လိုက်ကိုယ်စီဖြင့် အမုန်းမခံလို သည့် ဂေါပက
များအနေဖြင့်သာ သြဘာပေး အမြီးနှုန့်ကာ လက်ဝါးခြင်းရိုက်ကြပါဟု ထပ်မံအသိပေးလိုက်ပါ၏။
လာပါဦးမည် အမေရိကန်လွှတ်တော် အမတ် နှင့် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ပါတ်သက်သည့် သတင်းများ ..
သို့ သော် ထိုသတင်းများ၏ နောက်ကွယ် တွင် မြောက်ကိုရီးယားနှင့်ပတ်သက်သော ဆွေးနွေးအပေးအယူပြုမှုများနှင့် အတူ လူလည်ဝင်ကျလိုသော အမေရိကန်နှင့်
အမေရိကန် ကိုအသုံးချကာ အမြတ်ယူလိုသော စစ်အာဏာရှင်တို့၏ လက်ဝါးခြင်းရိုက် မှုအား လည်း မြင်ယောင်နေပါ၏။ နိဂုန်းချုပ် က တိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းပါမည်လား ။
မကောင်းနိုင်ပါ။ ထို့ ပြင် မြောက်ပိုင်း မှ အဖွဲ့အစည်းများက စစ်ရေးမဟာမိတ်ပြုပြီးလေပြီ။ ယခု တခါ ပြည်တွင်းစစ်ကို တခွင်တပြင်ပြန်စလျှင်တော့ နအဖ အနေဖြင့် ခံနိုင်ဖွယ်မရှိ။ ပြည်တွင်း ပြည်သူ လူထု၏ မေတ္တာတော်နှင့် စောင့်ကြည့်နေမှု ကတဖက်၊ အင်အား ကောင်းကာ
မိမိနယ်မြေမိမိကာကွယ်သော တရားသောစစ်ကို ဆင်နွှဲမည့် တိုင်းရင်းသားများကတဖက်ဖြင့်...... ထို အခါ ရင်ကြားစေ့ ချင်သောသူများ ထပ်မံကာ အချိုးပြောင်း၍ ပုဆိုးရောင်းကြဦးမည်ဖြစ်ပေ၏။
ရှက်ဖွယ်လိလိ ပါတကား ဟရို့...ဟု သာ ကျွန်ုပ်မောင်တုတ်ကြီးတယောက် လေပြေကလေးနှင့် ဖရုဿဝါစာ မဆဲဆိုပဲ ညည်းလိုက်ပါဦးမည်ခင်ဗျား... မတော် ဂေါပကများ ၀တ်ဖြူစင်ကြယ်ထဲ ကျင်ငယ်ထွက်မတတ် မျက်လုံးပြူး မျက်ဆံပြူးကုန်ကြလျှင် .. ထိုနည်းလည်းကောင်း... အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး
မြန်မြန်ထွန်းကား တိုးတက်လာပေတော့မည်ကို အဆင်သင့်မဖြစ်ကြသေးသော သူများ ကလည်း မသဒ္ဒါရေစာများနင်သွားနိုင်ပေသေးသကိုး။
စကားမစပ် ကျွန်ုပ်တွေးမိသည်မှာကား...အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးဆိုသည်မှာ ယခုကာလတွင်တော့ အမျိုးသမီးရင်ကြားစေ့ရေးလောက် ရင်ခုန်ဖွယ်တော့ကောင်းမည်မဟုတ်။ မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်ပါဦး ဘဘသန်းတို့ က တဖက် ကိုမောင်မောင်တို့က တဖက် ခန်းမကြီး တစ်ခုထဲတွင် တန်းစီကာ မျက်နှာချင်းဆိုင်
Posted by Nyein Zay Oo at 3:44 PM2comments
မောင်မောင်၊ဘိုလှတင့် စိန်ဝင်းတို့ ၏ သိမ်ဖျင်းသော လုပ်ရပ်နှင့် အော်မလို့ လုပ်ရင်းကောင်းရင်း ဆရာများ
မိုးကြိုးငှက်ငယ်လေးများ ၏ ကနဦး မူလ လက်ဟောင်းမိခင်ကြီး မာမီစိန်ဝင်း၊ မိဒွေးတော်ဂေါတမီ၏ ဟန်ပန် အတိုင်း ပဲပေး ညွှန်းဆို နေသော ဘိုလှတင့်နှင့် ကုတ်ချောင်းကုတ်ချောင်း အချီကြီးကြံကာ အလှပြင်ဆိုင် တက်သိမ်းရန်ကြံနေသည့်သောင်းထွန်း နှင့် အတူ ကျောက်ကုန်သည်လိုလို ဖာခေါင်းလိုလို ဖာဆွယ်လိုလို နှင့် မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံပေါ်အား ထမီနားဆွဲကာ ပုဆိုးလှန်တက်လာသော မောင်မောင် တို့သည် အတိုက်အခံတို့၏ ခရေပွင့်အား ဆီ ပင် ဆွတ်ချိန်မပေးပဲ အား ရပါးရ၊ ထဲထဲဝင်ဝင် ပြည့်ပြည့်နှက်နှက် စွမ်းစွမ်းတမံ ခြွေလိုက်ချိန်တွင်ကား ဂျကာ တာ ညီလာခံကြီး ဟု ပေါ်ပေါက်လာပေတော့သတည်း။
အနှီကိစ္စအား ခရေစေ့တွင်းကျ ရှင်းရမည်ဆိုလျှင်................မောင်မောင်ခေါ်ပြည်သစ်ညွန့် ဝေသည်ကား လှဦး (မယားငယ် ဘရာစီယာဝယ်ပေးရာတွင် စံပြဆုရ ၀န်ကြီး)၏ လက်သုံးတော် ဘ၀မှ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် ညွန့် ပေါင်း အစိုးရ ဟု ခေါ်ဆို တော်မူသော ဖာခေါင်း၊ အရက်သမား ၊ အခြောက် ၊ အငြိမ်းစား ချဲဒိုင်တို့ ၏ အဖွဲ့ တော်ကြီး အား ကပ်တွန်းတွန်းကာ ပဋိသန္ဒေပေးရန်အချီကြီးကြံခဲ့သည့် ကောင်တကောင်ဖြစ်ပေ၏။ ထိုကိစ္စအား ဂျီဘုန်းဘွဲ့ လွန် ရ ၀န်ကြီး ဘိုလှတင့် ဆိုသည့် ပုကွကွ ၀၀ မဲမဲ စပ်ဖြဲဖြဲ ဖြင့် မိခင် ဘာသာစကားအား လုံးစေ့ပါတ်စေ့မပြောတတ်တော့ပါသဖြင့် သိုးဆောင်းလိုပြောခွင့်ပေးရန် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ၏ ညီလာခံတစ်ခုတွင် မေတ္တာရပ်ခံပြီး ငပိ ထောင်း လျှာလကာရေလောင်း၍ နှစ်ပေါင်းများစွာ စားသောက်လာခဲ့သည့် သုဘရာဇာ၏ လေသံဖြင့် ပွားများရသည်ကို ခံတွင်းတွေ့ နေသောကောင်က လုံး ၀ ဥဿုံ မဘုတ်ဆုံ ကြည်သည်မဟုတ်ပေ။
သို့ ဖြစ်သော်ငြား..........ယခုအခါ မောင်မောင်ဆိုသည့် ကောင်နှင့် ဘိုလှတင့် စိန်ဝင်း လင်မယား သည် အပေးအယူတည့်ကာ နိုင်အောင် ဟု အမည်သညာတွင်တော်မူသော မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးအား ဖျက်ဆီးခဲ့သူ ခင်ဥမ္မာ၏ နောက်လင် နှင့် အပေးအယူတည့်ကာအနှီ သကောင့်သားတို့ သည်ကား ၀မ်းကိုက်ပိုး ရှစ်သောင်းလေးထောင် ထိုးနှက်မှုဖြင့် မနေနိုင်မထိုင်နိုင်အခင်းကြီးသွားတော်မူလိုချိန်တွင် အဟုတ်လိုလို အတည်လိုလိုဖြင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်၏ ရွှေဂုံတိုင် စာတမ်းကြီးအား ဆွဲယူ ဆုတ်ဖြဲ ချီးကုန်း ရင်း ကုလသမဂဟု အမည်ရသော အိမ်သာ စုတ်ကြီးတွင် ပဲ့ပဲ့ကြီး ငုတ်တုတ်ထိုင်ကာ အားရပါးရ ၀မ်းတော်လားရင်း မှတ်သားဖွယ်ရာ ကိုးကား တော်မူလျှက် ၊ ဗ.က.ပ၊ ကေအန်ယူ ၊ မ.က.ဒ.တ ၊ ဗ.က.သ၊ သံဃာ့ ဘာညာ ဘာညာ အဖွဲ့ကြီး နှင့် အတူ အားလုံးသော အဖွဲ့ အစည်းများ ၊ ပေးဆပ်စွန့် လွှတ်သူများအား ၄င်းတို့ ၏ ငယ်မွေးခြံပေါက် ကျွန်သဘောက်များသဖွယ် အပိုင်ဆက်ဆံကာ မုဒိန်းကျင့် မယားပြု မောင်ပိုင်စီးခြင်းအား..... အားလုံးသော အတိုက်အခံအဖွဲ့ များ က ၊ ကျားဖင်ခွေးလိုး သည့်ယင်းအဖြစ်ကို အပိုးကျိုး စွာ ငြိမ်ခံနေကြသည်ကို လည်း အံ့သြ စွာ တွေ့ ရသည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ဘဘကြီး သန်းရွှေသည်သာအခရာ ၊ ဘဘကြီးသန်းရွှေ ၏ မဲပြာ ရှုံ့ တွ ဘိုင်ယာဂရာ ကယ်တောင် မရတော့သော လီးတော်ကြီးအား ၀ိုင်းဝန်းစုတ်ကြရန် အတွက် အတိုက်အခံ ဖာသည် ဖာခေါင်း တိုင်းပြည်၏ အလားအလာရှိသော ခေါင်းဆောင်လောင်းများအားလုံးက တညီတညွတ်တည်း ချိုလိမ်စို့ သလို ဇိမ်တွေ့ နေကြသည်လည်း တမုံ့ ..............ဟု သာ ထင်မှတ်လိုက်ရပါတော့သတည်း။
တုတ်ကြီး (ခေတ္တ တာဝတိံသာ)
Posted by Nyein Zay Oo at 8:34 PM5comments
ယဉ်ယဉ်လေး ပြော ရမယ် ဆိုရင်တော့ ဗျာ ဟောဒီမှာ .....က...
မောင်မောင်၊ဘိုလှတင့် စိန်ဝင်းတို့ ၏ သိမ်ဖျင်းသော လ...